Namuhla sizoxoxa kanjani ukususa umdlalo kusuka kwikhompyutha yakho ngokuphelele. Nalokhu kungase kudingeke uqonde, ngoba ezinye izicelo kungathatha eningi isikhala bese ushiye umzila.
Ake sibheke indlela ukususa umdlalo kusuka kwikhompyutha yakho ngokuphelele "windose 8". Thola ukunqamulela ibekwe kudeskithophu, okuyinto unomthwalo kwethulwa isicelo ayisadingeki. Chofoza kuyo inkinobho yegundane kwesokudla bese uzule "Ifayela kwendawo" imenyu. Vula ifolda ne umdlalo. Ukuxazulula umbuzo kanjani ukususa umdlalo kusuka kwikhompyutha yakho ngokuphelele, unga lapha. Unins000 thola ezansi ifayela. Futhi, singasiza ifolda Khipha lapho isici wathi kuyoba. Leli fayela ihlinzeka ukususwa okuphelele isicelo kusuka kukhompyutha. Uyisebenzise bese uqinisekisa izinhloso zabo. A imizuzwana embalwa kamuva inkinga ziyoxazululwa.
Manje ake sibheke indlela ukususa ngokuphelele umdlalo "Alawar" kusuka kwikhompyutha yakho. Ukuze wenze lokhu, yiya engxenyeni ethi "Control Panel". Kungatholakala kubhalwe ku "Qala" imenyu. Sithola futhi ukuqalisa into "Izinhlelo". Lokhu kuzovula ohlwini lwezinhlelo zokusebenza eziye efakwe kwi computer. Sithola umdlalo engadingeki ngaphezulu "Alawar". Chofoza ngayo inkinobho yesinxele. Ngemuva kokusebenzisa "Susa" umsebenzi. Ungaphinde ukhethe into eyodwa kusuka kwimenyu yokuqukethwe ukuba uyovuka uma uchofoza sekwanele umdlalo, qhafaza kwesokudla. Okulandelayo uqinisekise ukususwa. Ukuze wenze lokhu, chofoza inkinobho "Yebo", futhi uma kudingeka, "Okulandelayo". Uma uhlelo lokusebenza kuzonyamalala uhlu izinhlelo, futhi ushiya ikhompyutha yakho. Inkinga nge studio "Alawar" ixazululwe.
Manje ake sibheke indlela ukususa umdlalo kusuka kwikhompyutha yakho ngokuphelele izinhlelo ezikhethekile. Bavumela wena ukuhlanza ngokuzenzakalela ebhukwini futhi ususe ifolda of the game. Phakathi izicelo ephumelela kunazo zonke zalolu hlobo kufanele ngokuthi Revo Isikhiphi. Sikhuluma uhlelo khulula elikuvumela ukuba ukhiphe ngokuphelele yimuphi umdlalo. Ngaphezu kwalokho, kuyoba ikhompyutha yakho izinhlelo ezingafuneki. Ukusebenzisa ithuluzi ngokuyinhloko, siqalisa Revo Isikhiphi. Ngokulandelayo, in the "Khipha" iwindi, khetha umdlalo ufuna ukususa kusukela ohlelweni. Yiya kwimenyu engenhla. Chofoza "Susa." Khetha imodi khipha bese uchofoze "Okulandelayo". I Onjiniyela ukutusa ukusetshenziswa okuhlukile omnene. Ngemva kokukhipha main livela uhlu izingxenye umdlalo, awasalayo ohlelweni. Khetha ke bese ucindezela "Susa." akufanele ukusula lwemibhalo ngokwayo nge umdlalo kudiski kanzima. Kungenjalo lokusebenza bezijabulisa uzoma ukusebenzisa, kodwa kufanele lugcinwe ohlelweni. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kungaba nomthelela ukusebenza PC yakho. Uma isicelo alikho uhlu ifakiwe, kusebenze "ukuzingela Imodi". Chofoza inketho efanele kusukela kumenyu. Kukhona emehlweni ekhethekile. Thina usithumele isithonjana isicelo kufolda lapho amafayela agcinwe umsebenzi walo. Ngakho esiphethweni kanjani ukususa umdlalo kusuka kwikhompyutha yakho ngokuphelele.
"Nensi Dryu: On the umzila ezikhuluma ngesiphepho esinamandla": ukuhamba
Efrijini "Veco" - umsizi okuthembekile wakho
Ikhekhe Okuprintiwe: iresiphi. Tula Gingerbread
Aphid ku ukhukhamba kule abamba ukushisa: kanjani ukulwa? amakhambi Folk. Izindlela zokunqanda aphid ku ukhukhamba kule abamba ukushisa: izibuyekezo, izithombe